Xirmooyinka maqaarka - Utien Pack Co,. Ltd.
Soo bandhigid soo jiidasho leh iyo cimri dherer
Marka baakidhka jidhka ku xidhan ee faakiyuum la qaato, filim gaar ah oo qalabaysan ayaa loo isticmaalaa in lagu shaabadeeyo sheyga ku yaal filimka hoose ee hoose ama sanduuqa taageerada horudhaca ah. Xirmada Utien waxay leedahay laba qaab oo baakad: baakada maqaarka Thermoforming vacuum iyo Tray sealing oo leh xirmooyin maqaarka.
Unifresh®-Skin Pack ： waxay siisaa saamaynta ugu fiican ee soo-saarka badeecada iyo nolosha shelf
Unifresh ® Filimka xirmada istiikarka ah wuxuu u ekaanayaa qaabka sheyga, sida lakabka labaad ee maqaarka sheyga, wuxuuna ku shaabadeeyaa filimka hoose ee la sameeyay ama sanduuqa taageerada horay loo sii diyaariyay. Filimku si adag ayuu u gogol xaaray oo u dhammaystiray foomka wax-soo-saarka ee sheyga, wuxuu ka hortagayaa qulqulka dareeraha, wuxuu soo bandhigi karaa badeecadda si qumman, dherer ah ama ganaax ah, sidoo kale wuxuu dheereynayaa nolosha shelf ee alaabada baakadaha. Adeegsiga tikniyoolajiyadda baakadka la rakibey ayaa u baahan adeegsiga kuleylka sameysmaya iyo mashiinka baakadka ku habboon, ama mashiinka wax lagu rakibo ee sanduuqa Prefabricated Box Sticker ee utienpack.
Baakadaha Maqaarka Thermoforming
Daabacidda Skin Thy of maqaarka
Unifresh packaging Baakadaha maqaarku waxay si gaar ah ugu habboon yihiin baakadaha qaar ka mid ah alaab tayo sare leh, sida hilibka iyo wax soo saarka hilibka, cuntada badda iyo kalluunka, hilibka digaagga ee guryaha, raashinka ku habboon, iwm. shuruudaha nolosha shelf sare packaging Baakadaha maqaarka.
Faa'iidooyinka baakadka maqaarku, marka lagu daro nolosha dheer ee cimriga dheer, waxay ku habboon yihiin baahida macaamiisha 'ee ah waaritaan waara; Waxay sidoo kale leedahay muuqaal tayo sare leh, muuqda oo la taaban karo; Marka la barbardhigo baakadaha kale, ma jiraan wax faleebo ah, ma leh casiir dusha sare ee filimka, ceeryaamo, iyo gariirku ma saameyn doonaan muuqaalka iyo qaabka hilibka; Sidoo kale way fududahay in la furo oo si fudud loo isticmaalo; Waxyaabaha ugu sarreeya (filimka daboolaya / filimka jirka lagu rakibay) ayaa la barbar dhigaa saxaaradda si loo sameeyo goynta ugu fiican isla markaana si weyn loo yareeyo qiimaha wax soo saarka.
Mashiinnada baakadaha iyo qalabka wax lagu rido
Labadaba mashiinka baakidhka filimka fidiya ee kulul iyo mishiinka baakadaha wax lagu xidho ee sanduuqa hore loogu hagaajiyay ayaa loo isticmaali karaa baakadaha jidhka lagu rakibay. Mashiinka shaabadaynta sanduuqa preformed wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo sanduuqa taakuleynta horay loo hagaajiyay, halka mashiinka baakadka ee foomka kulul loo isticmaalo buuxinta, daboolida iyo howlaha kale kadib markii warqada duubista filimka lagu kala bixiyo internetka. Mashiinka wax lagu duubo ee thermoforming-ka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, sida bixinta ad adag, daabacaadda calaamadaha, godadka jillaabyada iyo qaabeynta qaabdhismeedka kale ee shaqada, si kor loogu qaado xasilloonida baakadaha iyo wacyiga sumadda.
Mashiinka pacakging maqaarka faakiyuumka ah